Nchọpụta Mma Dị Mma: Ntụziaka AI nke Na-ebugharị Ahịa Mma Nweta Online | Martech Zone
Ọ dịghị onye nwere ike ịchọpụta mmetụta apocalyptic ahụ COVID-19 ga-enwe na ndụ anyị kwa ụbọchị na akụnụba yana ọrịre mkpọsa na mmechi nke ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'okporo ámá dị elu. O mere ụdị, ndị na-ere ahịa, na ndị ahịa niile na-eche maka ọdịnihu nke mkpọsa.
Mma Ngwunye Ngwunye
Mma Ngwunye Ngwunye™ (BME) bụ azịza maka ndị na-ere ahịa mara mma, e-tailers, nnukwu ụlọ ahịa, ndị na-edozi ntutu isi, na ụdị. BME bu ihe eji emeputa ihe eji eme ihe nke AI nke na-acha ocha nke na-ebu amuma ma choputa nhoro ndi ahia nwere ike zuta. Nakwa inwe ike ịkwado ngwaahịa BME na-ahazi isi ihe niile nke njem ntanetị n'ịntanetị site na elu-ere site na ọdịda peeji nke.
Dịka onye ọchụnta ego tech, nke a abụghị onye guzobere ya Nidhima Kohli's ngwọta mbụ nke dijitalụ. Nidhima bukwa onye hiwere Mma m dakọtara™ (MBM), nke hibere na 2015 ma kemgbe abụrụla nkwanye ngwaahịa ngwaahịa mara mma nke ụwa na saịtị ntinye ọnụahịa nke bụ otu n'ime weebụsaịtị kachasị mma n'ụwa karịrị 400,000 ngwaahịa.
MBM esoro ụfọdụ ndị na-ere ahịa mara mma kacha mma na ụdị ndị gụnyere Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Look Fantastic, Clarins, Bobbi Brown, na ndị ọzọ, na-enye ndị ahịa ohere ịzụ ha niile site na naanị otu weebụsaịtị wee jiri ọnụ ahịa tụnyere. Site na mmuta nke MBM, Kohli nwere ike were afọ ise nke data, nyochaa àgwà ịzụ ahịa ndị ahịa ma tinye ha na ụdị azụmaahịa ọhụrụ ya bụ BME bụ nke ebumnuche iji nye nghọta dị oke mkpa na akụrụngwa maka B2B.
Kedu otu Nhazi AI ji eme mgbanwe
Nchọpụta Mma Mma na-arụ ọrụ abụọ, site n'inwe ndị na-eri ihe ka ha tinye ozi ha site na iji Onye nnyemaaka Virtual ebe ọ bụla dị n'ịntanetị iji nweta ụdị nyocha mmekọrịta mmekọrịta gbasara ụdị akpụkpọ ha, nchegbu anụ ahụ, ntutu na ahụ ha, yana mmasị ngwaahịa na isi.
Data a na-enye BME ohere iji AI na data iji kwado ngwaahịa ziri ezi ozugbo. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, site na ịlele ịzụrụ na omume nchọgharị. Ezigbo oge ọmarịcha azịza na-agbanwe ahụmịhe ndị ahịa mara mma site na ịkwado ọrụ aka pụrụ iche, nke ahaziri iche na akara aka ọ bụla na njem ịzụ ahịa ha n'ịntanetị site na ire ere gaa peeji ọdịda na ndụmọdụ ngwaahịa.
Na BME, ndị na-azụ ahịa na-enweta onye enyemaka dị ka ahịa otu ụlọ, dị ka ahụmịhe n'ịntanetị yana site na nkasi obi nke ụlọ ha. Dịka ụlọ ahịa meghere ugbu a, BME nwekwara ike mejuputa ya na ụlọ ahịa nchekwa ụlọ iji mepụta atụmatụ omnichannel dị irè. Ọkwa dị elu nke Nhazi na aro nke na-enye ndị na-ere ahịa ikike ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-enweghị iwu ya.
Na, ugbu a karịa mgbe ọ bụla mgbe mgbanwe nke mkpọsa na-eduzi ụwa ọhụrụ post-COVID enwere mkpa maka mpaghara azụmaahịa iji mejuputa usoro BME iji hụ na ihe ịga nke ọma na nke kachasị mkpa bụ ịlanarị nke azụmaahịa ha ugbu a. ihu igwe.
Nke a bụ oge mbụ, e mepụtara ngwa ọrụ ahaziri iche maka ụlọ ọrụ mara mma ma nyekwa ya aka site na data ndị na-asọmpi nke a na-anụtụbeghị mbụ.
Yabụ kedu ka BME si arụ ọrụ?
Site na ijikọ ọnụ AI na ọgụgụ isi akọwapụtara nke ọma yana kwa afọ ise ọgụgụ isi, BME na-etinye igwe na-ahụ maka igwe na-agbanwe agbanwe iji chọpụta usoro nuanced n'ime usoro data ndị ahịa. N'aka ozo, BME na-achoputa ihe ndi ichoro mara mma site na nkpa, nkpa aru na izuta usoro. Ka ndị ahịa na-aga na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ozi ndị ọzọ akụrụngwa na-amụta ma na-ebuli elu na-akpaghị aka.
Injin ahụ na - eme ka nhọrọ ndị ahịa belata, na - ebu amụma banyere ngwaahịa ndị ahịa ga - azụta, na - abawanye ahịa, na iguzosi ike n'ihe. BME na-ahazi atụmatụ ngwaahịa, ngwaahịa mgbakwunye, ozi ịntanetị, ibe ọdịda, na ndị ọzọ ka ndị ahịa wee nweta ahụmịhe nke aha ogo 360 zuru oke nke na-enyere aka optimizing mgbanwe ntughari site na 30 rue 600%.
Emeela BME n'ụzọ dị irè na UK na French Pharmacy bụ ndị hụwororịrị 50% mmụba na AoV (Nhazi Nkezi Nkezi) yana mmụba 400% na ọnụego ntụgharị na ahịa. BME esorola akara ịchọ mma kachasị mma Site na Terry na otu n'ime ndị na-ere ahịa Mma Mma Douglas.
Dabere na nchọpụta ọmụmụ ndị emere n'oge na-adịbeghị anya, BME mere 18m ngwaahịa mara mma mara mma ruo ugbu a. O meela ka nkezi iji uru site nnukwu 50% na mụbaa ọnụego mgbanwe na ire ere site na ihe ntinye 400%.
Nchọ Mma Mma Kachasị Na-ere Mkpebi
BME nakweere usoro omnichannel dị irè maka ịre ahịa ka ọ na-arụ ọrụ na ntanetị, ngwa, email, na ụlọ ahịa. Nke kachasị mkpa, BME na-akwado data data na ọgụgụ isi ọgụgụ isi sitere na ndị ọkà mmụta sayensị na-eme ihe ngosi BME ịma mma mara mma ™ ziri ezi, eziokwu, na ntụkwasị obi n'ihe metụtara nsonaazụ ahaziri iche. Na, egwuregwu ndị a na-erite ezigbo mkpa nke onye na-azụ ahịa site na nkeji oge ha debanyere aha, n'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ na-ewe ogologo oge iji mụta omume nke ndị na-azụ ahịa.
Site na azụmaahịa azụmaahịa ngwa mgbakwunye na-ewe ndị ahịa naanị 1-2 awa iji mejuputa yabụ enweghị oke mmetụta na ụbọchị ha na-agba ọsọ azụmaahịa ha yana dịka ọ bụ nyiwe agbakwunyere na-ebuli na AI na-akpaghị aka, ndị ahịa nwere ike ịmasị ya na-eri oge usoro ntuziaka.
Kedu ka BME si dị iche?
Tụnyere ihe ndị ọzọ mma nhazi ahaziri iche n’ahịa, BME anaghị enye ezigbo ndụmọdụ maka ngwa ahịa dabere na ajụjụ, mana ọ na-ebu amụma omume ndị ahịa ma na-emezigharị ihe ọ bụla maka ụdị ịma mma ọ bụla site na ntutu isi na-esi isi na anụ ahụ na ntu. Ọ bụ usoro pụrụ iche mara mma pụrụ iche nke na-atụ aro ngwaahịa na agba kwesịrị ekwesị nke na-arụ ọrụ maka ụdị ịma mma ọ bụla site na nlekọta anụ ahụ na ntutu ma ọ bụghị naanị otu ụdị kachasị mma maka ndị ahịa. Ọzọkwa, dịka ọ na-akwado ya site na afọ 5 nke data, ọ na-emepụta mbuli elu maka ndị ahịa ya na ahụmịhe ndị ahịa ha site na ụbọchị 1.
Ugbu a n'ahịa, e nwere ọtụtụ ngwọta nchịkwa nke onwe nke 360 ​​nke anaghị edozi maka ịma mma ebe ọ bụ na ha abụghị mma mara mma, n'ihi ya, ha anaghị enye otu 400% elu na ahịa dị ka iji ezigbo mma mara mma ma ọ bụ were 3-6 ọnwa. n'ezie na-egosi ihe uplift na bụ nnọọ akwụkwọ ntuziaka.
Mma Beauty Engine nwere otutu obibia idozi ihe niile n'ji ịzụ ahịa ahụmahụ na bụla aka na-enyere ndị ahịa ịchọta ha Mma chesma ™ ma site na a Virtual Beauty nnyemaaka atụmatụ ma ọ bụ na-enweghị na a post COVID ụwa. Anyị na-ele anya ịkwalite mmepe ha site na iwetara ha netwọkụ anyị yana nka anyị n’ime ụlọ ọrụ mara mma.
Camille Kroely, Global Head of Open Innovation & Digital Services
Tọdịnihu bụ dijitalụ na ọganiihu nke mkpọsa mara mma… .is Mara mma mma engine ™.
Dutọ oge ngosi
Tags: aiịma mmamma kenha engineọmarịchaBobbi BrownClarinsHarrodsHarvey NwachukwuLibertyLee Ihe Ọmaịzụ ahịa n'ịntanetịọdịnaya ọdịnayaahaziri mmadundokwa